सिडियो सा’प, यसमा ध्यान दिने कि ? – sunpani.com
सिडियो सा’प, यसमा ध्यान दिने कि ?
सुनपानी । ११ श्रावण २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – सरकारले साउनभरी नाका बन्द गरेको छ । नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि त्यो लागु रहेको छ । तर, यो नाकाबाट यो वा त्यो कामको ‘सिफारिस’ बनाएर भारत जाने र आउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो सिफारिस बनाइदिने गरेका छन् ।
प्रायः सिफारिस बिरामीको उपचार गर्न, बिरामी आफन्ती भेट्नलगायतका कारणहरु खुलाइएका छन् । पालिकाहरुले दिएको यस्तो सिफारिसको इलाका प्रहरी कार्यालय, जमुनाहामा चाङ नै रहेको छ । भारतीय प्रहरीले पनि पालिकाहरुले दिएको सिफारिस अनुसार जान दिएका छन् ।
जरुरी काम परेकालाई जान दिनुलाई सामान्य नै मान्न सकिएला । तर, सबैको त्यस्तो सिफारिस सत्य नहुन पनि सक्छ, कसले जाँच गर्ने ? कुरा यतिमात्रै होइन, उनीहरु भारतबाट फर्केपछि कोरोना जाँच हुन्छ कि हुँदैन ? कसले निगरानी गर्ने ? जबकी भारतको लखनऊ र बहराइचमा दैनिक ठूलो संख्यामा कोरोनाका बिरामी देखा परिरहेका छन् । यहाँबाट उपचार गर्न, आफन्ती भेट्न, जरुरी काम गर्न जाने प्रायः लखनऊ र बहराइच नै हो ।
स्थानीय प्रशासनले भारतबाट आउनेलाई अनिवार्य रुपमा कोरोना जाँचको व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिएको छ । पालिकाको सिफारिसमा क्वारेन्टाइनबाट मानिस लैजाने, पालिकाको सिफारिसमा भारतमा आवतजावत गर्ने कामले समुदायमा कोरोना फैलिन सक्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसैपनि नेपालगञ्जमा चोक चोकमा गरिएका परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेका छन् । जबकी ती व्यक्तिमा कोरोना होला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्, सिवाय ऊ स्वयंलाई शंका लागेर जचाँउन जानुबाहेक ।
औषधी उपचार वा जरुरी काम परेर भारत गएर फर्किनेहरुले आएपछि पीसीआर जाँच गर्न आवश्यक रहेको छ । जसले ऊमात्रै होइन, उसका परिवार, छिमेकी पनि सुरक्षित रहन सक्छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले यसबारेमा पनि सोच्ने कि ?